मोबाईल चार्जमा राख्दा गर्नै नहुने यी ४ काम(एकपटक अवस्य पढ्नुहोला) – Sudursamaj
मुख्य पृष्ठसूचना/प्रविधिमोबाईल चार्जमा राख्दा गर्नै नहुने यी ४ काम(एकपटक अवस्य पढ्नुहोला)
मोबाईल चार्जमा राख्दा गर्नै नहुने यी ४ काम(एकपटक अवस्य पढ्नुहोला)
Madan | Monday August 10, 2020	Comments
काठमाडौं – नेपालको जनसंख्या भन्दा बढी मोवाइल फोनको संख्या पुगिसक्नुले पनि यसका प्रयोगकर्ताको संख्यालाई प्रष्’ट्याउँछ । हामी फोनबाट वा मोबाइलबाट अलगिएर बस्न सक्ने सम्भावना नै छैन । यसले हाम्रा दैनिक कामहरुमा निकै सहयोग पुर्‍याएको छ । तर, अर्कोतिर यसको बे’फाइदा पनि छ । त्यो हो– हामीले चलाउने स्मार्टफोनको ब्याट्रि धेरै नटि’क्नु । त्यसैले हामी मोबाइललाई पावरमा जोडिरहेका हुनसक्छौँ, मोबाइल जतिबेलै चार्ज गर्न खोजिरहेका पनि हुनसक्छौँ । तर, मोबाइल चार्ज गर्दा केही कुराहरुमा चाहिँ ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । ***भिडियो हेर्न तलको लिन्कमा क्लिक गर्नुहोला ***
१) मोबाइल धेरै बेर चार्जमा नजोड्नोस – सामन्यतयाः तीन घन्टाभन्दा बढी मोबाइल चार्जरमा जोडिरहनु हुँदैन । त्यसैले राति मोबाइलमा चार्जर जोडेर छोड्ने बानी छ भने हामी त्यसबाट सत’र्क हुनैपर्छ । २) पावर बैंक वा डु’प्लिकेट चार्जर – पावर बैंक वा डु’प्लिकेट चार्जरले मोवाइल चार्ज गर्ने बानी छ भने आजैदेखि यो बानी पनि ह’टाउँनोस् । यसले हाम्रो मोबाइलको ब्याट्री निकै छिटो बि’ग्रने सम’स्या हुनसक्छ ।
३) चार्ज गर्दै नचलाउने – मोबाइललाई चार्ज गर्दै चलाउने बानी छ भने आजैदेखि यस्तो बानी त्याग्नोस् । सबैभन्दा ख’राब यो बानीले तपाईको ज्या’नै पनि लिन सक्छ । ४) चार्ज लाउँदै बोल्न नहुने – मोबाइललाई चार्जमा लगाउँदै फोनमा बोल्ने तपाई हाम्रो बानी छ भने त्यो पनि खराब नै हो । चार्ज गरिरहेका बेला नै मोबाइलमा बोलिदा अ’धिक सक्रिय अवस्थामा रहेका इले’क्ट्रो म्या’ग्नोटिक्स वेभबाट निस्कने रे अर्थात वि’किरणले मानव शरीरलाई घा’त गर्छ ।
मोबाइल चलाउँदै चार्ज गर्दा विद्युत सर्ट हुने ख’तरा बढी हुन्छ । यसले तपाईको मोबाइल प’ड्कि’एर तपाईको ज्या’न पनि लिन सक्छ । नेपालमा नै मोवाइल प’ड्कि’एका घ’टना पनि स’म्भवतः तपाईले सुन्नु भएकै होला ।
भोलिदेखि सरकारले सबै विद्यार्थीहरुलाई नि:शुल्क ‘INTERNET’ दिदै, यसरी लिनुहोस मौ’काको फाइदा !
खुसिको खबर – नेपाल टेलिकमले ल्यायो अहिलेसम्मकै सस्तो डाटा प्याक !
नेपालमै सबैभन्दा सस्तो मुल्यमा धमाधम आकर्षक घर बनाउदै यो कम्पनीलाई सिधै सम्पर्क गर्नुहोस घरमै आयर बनाई दिन्छ !
अन्तत खुल्यो रहस्य : NCELL ले गरिब नेपालीलाई यसरि लुटिरहेको तथ्य बाहिर आयो, एकपटक सबै नेपालीले पढ्नै पर्ने !